မူးယစ်သားကောင် ဖခင်ကြောင့် နိုင်ငံအကျိုးပြု ပန်းကောင်းတစ်ပွင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြီ
မိမိတို့ကရင်ပြည်နယ်က ပေါများလှတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ပေါများလှတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပေါများလှတဲ့ လောင်းကစားအကြောင်းတွေကို အလျဉ်းသင့်သလိုရေးတင်ပါတယ်။ ရေးတင်တိုင်း ဆဲခံထိ၊ ကြိမ်းမောင်းခံထိတယ်။ ကိုယ့်ကရင်အုပ်စုထဲမှာ ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ်၊ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်တဲ့သူတွေထက် ဖြတ်လမ်းသမားတွေက ပိုပြီးပေါ်ပြူလာဖြစ်နေကြတဲ့ခေတ်ကိုး။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S
မနေ့က (မတ်လ ၂၄) ဘားအံမြို့နယ်၊ ခလောက်နို့ အုန်းတပင်ရွာမှာ ဗုံးမတော်တဆမှု (အဖြစ်မှန်ကို ရေးတင်ရင် ကိုယ့်လူမျိုးသိက္ခာကျမှာစိုးလို့) အထက်တန်းပြ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးပါ သေဆုံးမှု ဖြစ်လို့ဘဲ ပို့စ်အကျဉ်းရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်ကို နီးစပ်ရာလူတွေက သိပြီးသားဖြစ်ပမဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S
အဖေနဲ့သမီး နှစ်ယောက် စကားများရာကနေ ဆေးကြောင်တဲ့အဖေက လက်ပစ်ဗုံးကို လက်ထဲမှာဘဲခွဲပစ်ပြီး အဖေဖြစ်သူက အခင်းဖြစ်ပွါးရာနေရာတွင် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး အသက် ၂၄နှစ်အရွယ် အပြစ်မဲ့တဲ့ သမီးလေးက ဆေးရုံရောက်ရုံလေးတင်မှာ သေဆုံးသွားပါတယ်။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S
ပေါများလှတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး လက်နက်ပုန်း၊ လောင်းကစားတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ ပန်းကောင်းတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဆက်ပြီး ကြွေနေရအုံးမလဲ? ပညာကို အပတ်တကုတ်ကြိုးစားသင်ယူပြီး အသက် ၂၄ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ နှမျောစရာကောင်းတဲ့ အထက်တန်းပြကျောင်းဆရာမ ဖိုးမူလေး အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူပြီး ကောင်းရာဘုံဘဝကို ရောက်ပါစေ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S
QUARANTINE အဖြစ် နေနေရတဲ့ လူနာတွေကို အားပေး ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်လေးများ ရုပ်သံ
ကိုယ်တိုင် စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် ခံယူတာတောင် ဘာမှ စစ်ဆေးခြင်း မရှိလို့ ပွဲကြမ်းလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ လေးဦး ထပ်မံတွေ့ရှိပြီး နေအိမ်တွင်သာ QUARANTINE လုပ် စောင့်ကြည့်နေ
စနိုက်ကျော်ခဲ့တဲ့ဘဲနဲ့ RS ချိတ်ပြီး G Fattရဲ့ အသဲနှလုံးကို နင်းခြေလိုက်ပြန်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
တရုတ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း သတင်းဖွင့်ချခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် ပျောက်ဆုံးနေ VIDEO
Copyright © 2020 E.T.S. All rights reserved.